एकैसाथ दुई कृति ः ‘जूनको रोटी’ र ‘अर्जुन–वाण’ | चितवन पोष्ट दैनिक
एकैसाथ दुई कृति ः ‘जूनको रोटी’ र ‘अर्जुन–वाण’
२०७१ फाल्गुन ९, शनिबार ०३:५९ गते
मृदु स्वभाव, तिखो व्यङ्ग्यका धनी कवि खनाल रेवतीरमण चितवनको कविवृत्तमा पाका कवि मानिन्छन् । विक्रम सम्वत् २०१३ मा गोरखामा जन्मिएका खनाल लामो समयदेखि चितवनमा स्थायी बसोबास गर्दै आएका छन् । विक्रम सम्वत् २०४७ मा “ल्याऊँ साम्यवाद” शीर्षकको काव्य प्रकाशित गरी कृतिकारका रुपमा दरिएका रेवतीले रमण “एप्याथी” उपनामबाट पनि साहित्यको सिर्जना गरेका छन् । यिनको हालसालै “जूनको रोटी” नामक कवितासंग्रह र “अर्जुन–वाण” नामक मुक्तकसङ्ग्रह बजारमा आएका छन् । यसअघि “कथोपकथन” कविता–गीतसङ्ग्रह (२०५९) र “मान्छेभित्र मान्छेको खोजी” हाइकुसङग्रह (२०६१) प्रकाशित भइसकेका छन् ।
कवि खनाल रेवतीरमणको एकल कृतिका रुपमा चौँथो कृति भएर प्रकाशित भएको “जूनको रोटी” कवितासङ्ग्रह विविध भावका ६१ वटा फुटकर कविताहरुको सङ्कलन हो । घटीमा एक पृष्ठदेखि बढीमा चार पृष्ठसम्मको आयाममा फैलिएका यी कविताहरुमा मुक्त लय र बद्ध लय दुवैको प्रयोग पाइन्छ । यसभित्र शास्त्रीय तथा लोकलयजस्ता बद्ध लयका ९ वटा र मुक्त लयका ५२ वटा कविताहरु समेटिएका छन् । त्यस्तै, “पशुहरु” शीर्षकको कविताभित्र बीसवटा टुक्रे कविताहरु राखिएका छन् । विविध भाव भएका यो कृतिको मूल स्वर व्यङ्ग्य हो भने अन्य स्वरहरु गौण स्वर हुन् ।
व्यङ्ग्यात्मकता मूल स्वर भएको “जूनको रोटी” कवितासङ्ग्रहभित्र कविले आफैँलाई पनि यसरी व्यङ्ग्य गरेका छन् ।
न बिम्ब छ
न प्रतीक छ
न छन्द छ
न अलङ्कार छ
इस्, तेरो कविता !
(आफ्नै कविताप्रति, पृ. १४३)
राजनीतिप्रतिको वितृष्णा र नेताहरुले गरेको झूटो आश्वासनले आजित जनताको दिक्दारीलाई कवि यसरी कवितामा उतार्छन् ः
जनता नुनका कुरा गर्छन्
तपाईं सुनका कुरा गर्नुहुन्छ
जनता बत्तीका कुरा गर्छन्
तपार्इं जूनका कुरा गर्नुहुन्छ ।
(भालु पुराण, पृ. ६२)
राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति कवि बढी सचेत देखिन्छन् । कतै यो देशको राष्ट्रियता गुम्ने त हैन ? भन्ने चिन्तालाई कविले यसरी व्यक्त गरेका छन् ः
मलाई पीर लागिरहेछ यतिबेला
कतै छोग्याल र लेण्डुपको भूतले
मेरो देशलाई ऐँठन गर्ने त हैन ?
म खबरदारी गरिरहेछु ।
(बिम्बचित्रमा मेरो देश, पृ. ८२)
मुक्तलयमा बिम्ब र प्रतीकका माध्यमबाट भावलाई उतार्न सफल कवि रेवतीका बद्ध लयका कविताहरु भने बढी सरल र स्पष्ट देखिन्छन् । उदाहरण ः
हेर्छु छिमेकमा देख्छु
हराभरा भए गरा
लाग्छ भर्ने भए भोकै
हाम्रा लाला कठैबरा ।
(बाँझो खेत, पृ. ९६)
विज्ञानको प्रगतिका कारण विश्वका कतिपय देशहरुमा चरम उन्नति भइरहेको यो समयमा हाम्रो राष्ट्रिय समस्या भने गरिबी र भोक बनिरहेको छ । यो भावलाई कविले सुन्दर ढङ्गले कवितामा यसरी उतारेका छन् ः
लाग्छ मनको लड्डु
र, जूनको रोटीको स्वाद
उस्तै÷उस्तै हुँदोरहेछ ।
(मनको लड्डु र जूनको रोटी, पृ. १३)
समग्रमा “जूनको रोटी” पठनीय कविताकृति बनेको छ । यसले नेपाली साहित्यलाई एउटा थप आयाम प्रदान गरेको छ भने चितवनको साहित्यलाई समृद्ध बनाएको छ ।
कवि खनाल रेवतीरमणको पाँचौँ एकल कृतिका रुपमा प्रकाशित “अर्जुन–वाण” २३० वटा मुक्तकहरुको सँगालो हो । हरेक पृष्ठमा तीन–तीनवटा मुक्तक राखिएको यो कृतिको अन्तिम पृष्ठमा भने दुईवटा मात्रै मुक्तक राखिएको छ । यसभित्रका हरेक मुक्तकमा चार पाउ वा पङ्क्ति छन् । सुरूका दुई पङ्क्ति र चौँथो पङ्क्तिमा अनुप्रास योजना गर्ने र तेश्रो पङ्क्तिलाई अनुप्रासहीन बनाउने रूवाई शैलीमा रचिएका यी मुक्तकहरु चोटिला खालका छन् । अधिकांश मुक्तकहरुले रेवतीका मूल प्रवृत्ति अर्थात् व्यङ्ग्यलाई अनुसरण गरेका छन् भने केही मुक्तकहरु प्रेम–प्रणयलाई चित्रण गर्ने खालका पनि छन् । त्यस्तै राष्ट्रियता, मानवतावाद, सांस्कृतिक समस्या, सामाजिक समस्या, आर्थिक समस्याजस्ता समस्यामा केन्द्रित मुक्तकहरु पनि यस कृतिभित्र समेटिएका छन् ।
राजनीतिक व्यङ्ग्य कविको मूल प्रवृत्ति हो । यो देशका नेताहरुलाई कविले आफ्नो मुक्तकमार्फत यसरी व्यङ्ग्य गरेका छन् ः
कोही कोही मान्छेहरु कसारे हुन्छन्
कोही कोही मान्छेहरु भसारे हुन्छन्
किन होला खै ? हाम्रो देशका नेताहरु
अरु देशका भन्दा बढ्तै बेसारे हुन्छन् ।
(अर्जुन वाण, पृ. ७२)
शासनसत्ता फेरिए पनि व्यवहार नफेरिएकोमा कविको तीव्र व्यङ्ग्योक्ति यस्तो खालको छ ः
शिक्षा निःशुल्क छ, स्कुलमा पढ्ने किताबै छैन
लुट्नेले अकुत लुटे कुनै हर हिसाबै छैन
नयाँ नेपाल भनेको यही त हो नि पासा !
जसले जे गरे हुन्छ, कुनै न्याय निसाफै छैन ।
(ऐजन, पृ. ८)
कविले उखान टुक्कालाई मिलाएर यसरी मुक्तक तयार
पारेका छन् ः
कर्म गर्दै जानुपर्छ चाह पुग्दै गर्छ
त्यसै त रचेनन् जिज्यूले यी उखानहरु
हात्ती लस्कँदै गर्छ, कुकुर भुक्दै गर्छ ।
(ऐजन, पृ. ४५)
करिव ६ दशक उमेर पार गर्न लागिसकेका कविको मन भने तरूनो देखिन्छ । सोह्र वर्षे ठिटाले गर्ने खालको अभिव्यक्तिलाई कविले यसरी व्यक्त गरेका छन् ः
तिमी र म भेट्न पाए हुन्थ्यो
भोक र तिर्खा मेट्न पाए हुन्थ्यो
अरु केही चाहिन्न भो मलाई
तिम्रो काखमा लेट्न पाए हुन्थ्यो ।
(ऐजन, पृ. २९)
समग्रमा यिनका मुक्तकहरु व्यङ्ग्यात्मकताले भरिएका छन् । व्यङ्ग्यात्मक दृष्टिले यिनका मुक्तक सुन्दर छन् भने मुक्तकीय झट्का र कलात्मकताका दृष्टिले अझै खारिन बाँकी भएको आभास मिल्छ ।
यतिबेला चितवनको साहित्य राष्ट्रिय मूलधारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हैसियतमा देखिएको छ । आख्यान, निबन्ध र काव्य क्षेत्रमा पनि निकै सशक्त बन्दै गइरहेको छ । यो महायात्रामा एकैसाथ दुई कृतिहरु लिएर होमिएका कवि खनाल रेवतीरमण बधाईका पात्र बनेका छन् । यिनको लेखनीलाई सलाम गर्दै निरन्तर साहित्यको यात्राको कामना गर्दछु । छिट्टै अन्य सशक्त काव्यकृतिहरु पाठकसामु आऊन्
भन्ने शुभकामनासहित कलमलाई विश्राम दिन्छु ।